အိမ်တွင်းမှာ ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ကြရအောင် – Blue Sea
blueseaskt | August 14, 2019 | Education | No Comments
ပထမဦးစွာ ဥယျာဉ်ခြံစိုက်ပျိုးခြင်းကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ရလျှင် ဉယျာဉ်ခြံစိုက်ပျိုးခြင်းဟာနည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ နေရာအမျိုး မျိုးမှာ အပင်စိုက်ခြင်းဖြစ်စဉ်တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ အပင်၏ကြီးထွားမှု ပုံစံအမျိုးမျိုးပေါ် မူတည်ပြီး စိုက်ပျိုးစနစ်အမျိုးမျိုး ရှိလာပါသည်။ အဓိက စိုက်ပျိုးပုံစံများမှာ (၁)အိမ်တွင်း ဥယျာဉ်ခြံ (Home gardens) ၊ (၂) ကျောင်း ဥယျာဉ်ခြံ ( School gardens)၊ (၃) စီးပွားဖြစ် စိုက်ပျိုးသော ဥယျာဉ်ခြံ ( Industrial Gardens)၊ (၄) အမျိုးသားပန်းခြံ (National Parks)၊ (၅) ပရဆေးစိုက်ခင်း(Arboretum)၊ (၆) ကျေးလက်ပန်းခြံ (Urban Parks) စသဖြင့် ရှိကြပါသည်။
အခုခေတ်အခါတွင် အိမ်တွင်းစိုက်ပျိုးခြင်း မှ အခန်းတွင်းစိုက်ပျိုးခြင်းကို လူအများ ပိုမိုစိတ်ဝင်စား စိုက်ပျိုးလာကြပါ သည်။
အခန်းတွင်း စိုက်ပျိုးရာတွင် များသောအားဖြင့် ဘူး၊ အိုး၊ ကွန်ကရစ်အိုးများ၊ ကွန်တိန်နာ တို့ကို အသုံးပြု စိုက်ပျိုးနိုင်ပါ သည်။ ယခုအခါ အလှစိုက်အပင်များ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ ၊ ဆေးဘက်ဝင်အပင်များ အသုံးပြုပြီး အိမ်တွင်း အလှဆင် ရန်အတွက် အခန်းတွင်းစိုက်ပျိုးနည်းကို ပိုမိုစိတ်ဝင်စား လူကြိုက်များလာသည်။ အချို့လူများသည် စွန့်ပစ် ပလပ်စတစ် ဘူးများ (သို့) ထိပ်ဝကျဉ်းသော ဘူးကြီးများအသုံးပြု၍ အိမ်တွင်းအပင်များကို စိုက်ပျိုး ကြပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ စိုက်ပျိုး သော စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်ကို “Terrarium ’’ ဟုခေါ်ကြသည်။
အခန်းတွင်း စိုက်ပျိုးနည်းစနစ်တွင် အရိပ်ကြိုက်အပင်များကို ဦးစားပေးစိုက်ပျိုးကြသည်။ စိုက်ပျိုးရန် ရွေးချယ်ထားသော အပင်များမှာ နေရောင်ခြည်အနည်းငယ်သာ လိုအပ်သောအပင်များဖြစ်ပါသည်။ အခန်းတွင်းစိုက်ပျိုးခြင်းတွင် အပင် စိုက် ပျိုးထားပြီးသော အိုး (သို့ ) ပုံးများကို မြေပြင်၏အမြင့် ကွန်ကရစ်ခုံများ( သို့ ) သစ်သားစင်များတွင် ထားရှိ စိုက်ပျိုး ကြပါသည်။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်အပင် အားလုံးနီးပါးကို အခန်းတွင်း စိုက်ပျိုးနည်းဖြင့် အောင်မြင်စွာစိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။ အခန်းတွင်း စိုက်ပျိုးရာတွင် အိပ်ခန်း ၊ ပြတင်းပေါက်ဝရန်တာများ ၊ အိမ်ရှေ့ဆင်ခွင်အောက်ဝရံတာ ၊ အိမ်ရှေ့မျက်နှာစာ ၊ မီးဖိုချောင် ၊ လှေခါးထစ်ကဲ့သို့ ပြုလုပ်ထားသောထိုင်ခုံများ နှင့် အမိုး စသည့်နေရာများသည် အခန်းတွင်းစိုက်ပျိုးရန်အတွက် အကောင်းဆုံး နေရာများဖြစ်ပါသည်။ မိမိအိမ်အတွင်း စိုက်ပျိုးရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်မည့် နေရာကို ရွေးချယ်ရမည် ဖြစ်ပါ သည်။
၁။ အခန်းအတွင်းစိုက်ပျိုးခြင်း ကို အလွယ်တကူ ပြုလုပ်နိုင်သလို မိမိအိမ်အတွင်း မိမိကြိုက်နှစ်သက်သော နေရာတွင် လွယ်ကူစွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပြီး အပြင်ဘက်စိုက်ပျိုးခြင်းများကဲ့သို့ နေရာအများကြီးလည်း မလို အပ်ပါ။
၂။ အခန်းတွင်းစိုက်ပျိုးခြင်းဟာ စိုက်ပျိုးရေးကို စတင်လေ့လာသူအတွက် အကောင်းဆုံးပါ။
၃။ စိုက်ပျိုးမြေ ပြင်ဆင်ရတာ လွန်စွာ လွယ်ကူပါသည်။
၄။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် ပန်းများအား တစ်နှစ်ပတ်လုံး စိုက်ပျိုးရရှိနိုင်ပါသည်။
၅။ ပိုးရောဂါကျရောက်မှုမှာလည်း ပြင်ပစိုက်ခင်းအတွင်း စိုက်ပျိုးခြင်းထက် ကျရောက်မှု နည်းပါသည်။
၆။ အိမ်ထောင်ရှင်မများနှင့် ကလေးငယ်များလည်း စိုက်ပျိုးထိန်းသိမ်းနိုင်ပါသည်။
၇။ အခန်းတွင်းစိုက်ပျိုးခြင်းသည် အိမ်ကို လှပစေရုံသာမက လတ်ဆတ်သော အော်ဂန်းနစ် ဟင်းသီးဟင်း ရွက်များ၊ ဆေးဖက်ဝင်အပင်များ ၊ ပန်းများကို ထုတ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ လစဉ် အိမ်အတွက် ဟင်းသီး ဟင်းရွက်နှင့် ပတ်သက်သည့် ကုန်ကျစရိတ်များလျော့ချစေပါသည်။
၈။ အခန်းတွင်း စိုက်ပျိုးခြင်းသည် စိတ်ပင်ပန်းမှုကိုလည်း လျော့ချပေးသည့် အကောင်းဆုံး အထောက် အပံ့ လည်းဖြစ်သည်။
၉။ ကျန်းမာရေးချို့တဲ့သူများမှ စိုက်ပျိုးရေးကို စိတ်ပါဝင်စားသူများအနေဖြင့် မိမိအိမ်တွင် အခန်းတွင်း စိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။
၁၀။ စိုက်ပျိုးသည့်အပင်၏ သဘာဝနှင့် လိုအပ်ချက် (အပူချိန် နှင့်ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေ ) စသဖြင့် အပင်ကြီးထွားရန်အတွက် လိုအပ်သည့်အခြေအနေအား အခန်းအတွင်း အပင်စိုက်ပျိုးပြီးချိန်တွင် ပြောင်း လဲပေးနိုင်သည်။ (ဥပမာ – အချို့အပင်များအနေဖြင့် အလင်းအများကြီးလိုအပ်သည်။ အချို့မှာ တဝက်တစ်ပျက်အရိပ် လိုအပ်သည်။ အပင်လိုအပ်သော အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး စိုက်ပျိုးထားသည့် အိုးများအားနေရာ အရွေ့အပြောင်းပြုလုပ်နိုင် သည်။
၁၁။ အခန်းတွင်းစိုက်ပျိုးခြင်းသည် မြေကြီးအနည်းငယ်ဖြင့် စိုက်ပျိုးရသော စိုက်ပျိုးရေးလည်း ဖြစ်သည်။
၁၂။ အကောင်းဆုံးသော အကျိုးရလာဒ်အဖြစ် အချို့အပင်များ အခန်းအတွင်းစိုက်ပျိုးခြင်းသည် လေထုကို သန့်စင်ပေးသည်။
၁၃။ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းများတွင်နေထိုင်ပြီး စိုက်ပျိုးမြေပိုင်ဆိုင်မှု မရှိသောသူများအနေဖြင့် အခန်း အတွင်း စိုက်ပျိုးခြင်းသည် လွန်စွာအသုံးဝင်ပြီး အထောက်အပံ့ဖြစ်စေသည်။
၁၄။ အခန်းအတွင်း စိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် အစိမ်းရောင်အပင်များအားလုံး ရှင်သန်ရန်အတွက် အထောက်အပံ့ လည်းဖြစ်စေပါသည်။
၁။ သစ်ပင်ကြီးများ စိုက်ပျိုးရန် မဖြစ်နိုင်ပါ။
၂။ ဓါတုဓါတ်မြေသြဇာ သုံးစွဲမည်ဆိုပါက အိုးအတွင်း စုကျန်နေမည်ဖြစ်ပြီး စိုက်ပျိုးထားသော အပင် အတွက် ဆိုးကျိုးကို ဖြစ်စေပါသည်။
၃။ အပင်အတွက်လိုအပ်သော မြေကြီး၏အစိုဓါတ် ပုံမှန်ဖြစ်နေရန် ခက်ခဲသည်။
၂။ မြေဆွေး သို့ ဓါတ်မြေသြဇာ
၃။ အပင်/ မျိုးစေ့
၄။ အိုး / ကြန္တိန္နာ
၇။ တမာဆီ ( ပိုးကာကွယ်ရန်)
၈။ လက်ကိုင်စိုက်ပျိုးရေးသုံးကိရိယာများ ကိုင်းဖြတ်ကတ်ကြေး/ ထွန်ခြစ်/မြေဆွခရင်း/ ပေါက်ပြား
အခန်းအတွင်းစိုက်ပျိုးခြင်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ခြင်းမဟုတ်သော်လည်း အောက်ပါလိုအပ်ချက်များ ရှိရင်တော့ ပိုကောင်းပါသည်။ hydroponic system ဖြင့် အခန်းအတွင်းစိုက်ပျိုးမည်ဆိုပါ က မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။
အိမ်၏လွတ်သောနေရာတွင်စိုက်ပျိုးခြင်း (Open area of House)
အဓိကအားဖြင့် အိမ်ရှေ့ လှေခါးထစ်ကဲ့သို့ ပြုလုပ်ထားသော ထိုင်ခုံများ နှင့် အမိုး ကဲ့သို့နေရာများကို ဆိုလိုသည်။ နွေ အခါတွင် အလွန်ပူသောနေရာများဖြစ်သည်။ အပူဒဏ်ခံနိုင် သောအပင်များ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်အပင်များ၊ အသီးသီးပြီး သက်တမ်းတိုသောအပင်များ စသဖြင့် နေရောင် နှင့် လေ အပြည့်အဝ ရရှိရန် ဘောင်အမြင့်များ ပြုလုပ်ခြင်း(သို့) သင့်တော် သော ဘူး/အိုးများ အသုံးပြုပြီး သင့်တော်သောရေပေးစနစ်ဖြင့် စိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။
အိမ်ရှေ့တွင် စိုက်ပျိုးခြင်း( In front of the house )
အရိပ်ကျသောအခြေအနေတွင် ကြီးထွားနိုင်သည့် အပင်များကို ရွေးချယ်စိုက်ပျိုးရပါမည်။
အိပ်ခန်း နှင့် ဧည့်ခန်းများတွင် စိုက်ပျိုးခြင်း
ပြတင်းပေါက်များဘေးတွင် စိုက်ပျိုးခြင်း – လေဝင်လေထွက်ကောင်းပြီး အလင်းရောင်များများ လိုအပ်သောအပင်များ ရွေးချယ်စိုက်ပျိုးရပါမည်။
အကောင်းဆုံးနေရာများဖြစ်ပြီး နေရောင်နဲ့လေအပြည့်အဝ ရရှိသောကြောင့် နေရောင်အပြည့်အဝ လိုအပ်သောအပင်များ စိုက်ပျိုးနိုင်ပါသည်။
စိုက်ပျိုးအပင်များ အပင်ကြီးထွားခြင်း နှင့် အမြစ်ကြီးထွားမှုပေါ်မူတည်ပြီး စိုက်ပျိုးထားသည့် အိုးများရှိမြေများ လဲလှယ် ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ အိုးပြောင်းပေးခြင်းသည် အခန်းတွင်း စိုက်ပျိုးခြင်းတွင် အရေးပါသည်။ ပထမအိုးထဲမှ ပြောင်း ထဲ့မည့်အိုးထဲသို့ အပင်အား ပြောင်းရွှေ့မထည့်မှီ ပြောင်းထည့်မည့် အိုးထဲတွင်၂ နာရီ ကြိုတင် မြေဖြည့်ပြီး ရေလောင်း ထားရမည်။ ရေများ အိုးအောက်ခြေမှ စီးထွက်သွားပြီးသည်အထိစောင့်ပြီး ရေမများစေရန်လည်း သတိပြုရမည်။ အပင် အား အိုးအသစ်သို့ ပြောင်းရွေ့ရာတွင် အမြစ်ကို ထိခိုက်မှုမရှိစေရန်လည်း သတိပြုရမည်။
ရေပေးခြင်းစနစ် ( Water Management)
အိုးများဖြင့် စိုက်ပျိုးထားသောအခါ အပင်ရေလောင်းချိန်တွင် ပိုပြီးဂရုစိုက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ရေများလွန်းခြင်း နည်း လွန်းခြင်း မဖြစ်အောင်သတိပြုရပါမည်။ ရေကို အရှိန်ပြင်းပြင်းမလောင်းဘဲ ဖြည်းဖြည်းနှင့် စိမ့်ဝင်အောင် လောင်းရပါ မည်။ ရေလိုအပ်နေသည်ကို အရွက်လိပ်ခြင်း၊ ညှိုးကျနေခြင်းကို မြင်ခြင်းဖြင့် သိနိုင်မည်။ အိုးထဲရှိမြေသည် အမြဲစိုနေရန် လိုအပ်ပြီး လေဝင်လေထွက်ကောင်းစေရန်နှင့် ရေစီးဆင်းမှုကောင်းစေရန် မကြာခဏ မြေဆွပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။ အိုးများတွင် ရေစီးဆင်းမှုကောင်း မွန်စေသည့် ရေထွက်ပေါက်များရှိနေစေရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။
အပင်ပေါ်သို့ ရေပေးစနစ် ( Syringing)
ရေမှုန်များ အပင်၏နေရာအနှံပေါ်သို့ကျစေပြီး ရေကြောင့် အပင်ကို အေးစေသော ရေလောင်းစနစ် ဖြစ်ပါသည်။ အခန်း တွင်း စိုက်ပျိုးသောအပင်များမှာ မိုးကြောင့်ရေရှိမှု မရှိသော အပင်များဖြစ်သည့် အတွက်အပင်ပေါ်သို့ ရေမရောက် နိုင်ပါ။ ရေဖြန်းဘူးများဖြင့် အပင်ရှိ အရွက်များအား တဖြည်းဖြည်းစိုအောင် ဖြန်းရပါမည်။ ထိုကဲ့သို့ ရေဖြန်းခြင်းဖြင့် အရွက်များကို သန့်ရှင်းစေခြင်း၊ အပင်၏အစာချက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ပိုမိုအကျိုးရှိစေခြင်း၊ စိုစွတ်သောလေထုကို ဖြစ် စေပြီး အပင်ကို ပိုမိုကျန်းမာသန်စွမ်းစေခြင်း အကျိုးကျေးဇူးတို့ ရရှိပါသည်။
အခန်းတွင်း စိုက်ပျိုးရာတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစား လိုက်နာရမည့် အချက်များ
၁။ ဝရံတာတွင် စိုက်ပျိုးသောအပင်များကို နေရောင်ရရှိသည့်ဘက်ကို မကြာခဏလှည့်ပေးရမည်။ သို့မှ တစ်ပင်လုံး ညီညာစွာ ကြီးထွားမည်ဖြစ်သည်။
၂။ နေလောင်ခြင်းမဖြစ်စေရန် နေရောင်တိုက်ရိုက်အကြာကြီး ကျရောက်သောနေရာတွင် အိုးမထားသင့်။
၃။ အချို့ပန်းပင်များသည် ပန်းပွင့်ရန်အတွက် နေရောင်ရရှိရန် အချိန်နာရီများစွာ လိုအပ်သော်လည်း ရွက်လှ ပင်အများစုမှာ အလင်းလုံးဝ မလိုအပ်ပါ။
၄။ ဟင်းသီးဟင်းရွက် အပင်များအတွက် စိုစွတ်သောအခြေအနေ လိုအပ်ပြီး အိမ်အတွင်း အခန်းများတွင် စိုစွတ်နေစေရန် ဖန်တီးဖို့မလွယ်ကူပါ။ စိုထိုင်းဆ အမြဲရှိနေရန်အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ကျောက်စရစ်ခဲများ အပင်ဘေးနားတွင် ထည့်ထားပြီး ကျောက်စရစ်ခဲများ အပေါ်တွင် ရေဖြန်းပေးရပါမည်။ နောက်တနည်း ကျောက်ခက်ဆွေးများ (တစ်ဝက်တစ်ပျက် ဆွေးမြေ့ခြောက်သွေ့နေသော ကျောက်တုံးကပ် အပင်များ ) ကို အိုးအပေါ်မျက်နှာပြင်တွင် ထည့်ပေးခြင်းဖြင့် အစိုဓါတ်ကို အမြဲရရှိစေပါသည်။
၅။ စိုက်ပျိုးသောနေရာအတွက် အမှန်ကန်ဆုံးအပင်ကို ဝယ်ယူရန်လိုအပ်သည်။
၆။ လက်ဖြင့် အလွယ်တကူသုံးစွဲရမည့် စိုက်ပျိုးရေးကိရိယာများ ရှိရမည်။
၇။ မျိုးစေ့မှ စတင်စိုက်ပျိုးမည်ဆိုပါက မိမိဒေသရှိ စိုက်ပျိုးသူများမှ စိုက်ပျိုးနည်းလမ်းများ နှင့် အပင်၏ သဘာဝကို လေ့လာဆုံးဖြတ်ရမည်။ အချို့သောအပင်များသည် မျိုးစေ့မှ ပျိုးဘောင်ဖြင့် အပင်ဖောက်ပြီး ပျိုးပင်ကို ပြောင်းရွေ့စိုက်ရသော်လည်း အချို့အပင်များမှာ တိုက်ရိုက်အစေ့ချ စိုက်ပျိုးနိုင်သည်။ ပျိုးပင် ငယ်များ ပြောင်းရွှေ့စိုက်ပျိုးချိန်တွင် ပျိုးပင်များ၏ အမြစ်သည် လွန်စွာထိခိုက်ပျက်စီးလွယ်သဖြင့် ပျိုးပင်များအား ဂရုတစိုက် ကိုင်တွယ် ရွေ့ပြောင်း စိုက်ပျိုးရမည်။
၈။ အခန်းအတွင်း စိုက်ပျိုးမည်ဆိုပါက အပင်များစိုက်ပျိုးမည့် ကွန်တိန်နာ (သို့) အိုး ကြီးလျှင် ပိုကောင်း ပါသည်။ မြေကြီးများများဝင်ဆန့်ပြီး စိုထိုင်းဆ ကြာရှည်ထိန်းထားနိုင်ခြင်း ဖြစ်စေ၍ စိုက်ပျိုးအပင်၏ အမြစ်ပိုင်းကြီးထွားမှု ပိုမိုအထောက်အပံ့ဖြစ်ကာ အပင်ပိုမို ကြီးထွားရှင်သန်စေပါသည်။
Aye Thanda Soe (8.10.2017)
စိတျကူးထဲက အိမျတှငျး ဥယြာဉျလေးတဈခုကို လကျတှဖေ့နျတီးကွမယျ
ပထမဦးစှာ ဥယြာဉျခွံစိုကျပြိုးခွငျးကို အဓိပ်ပါယျဖှငျ့ရလြှငျ ဉယြာဉျခွံစိုကျပြိုးခွငျးဟာနညျးလမျးပေါငျးစုံနဲ့ နရောအမြိုး မြိုးမှာ အပငျစိုကျခွငျးဖွဈစဉျတဈခု ဖွဈပါသညျ။ အပငျ၏ကွီးထှားမှု ပုံစံအမြိုးမြိုးပျေါ မူတညျပွီး စိုကျပြိုးစနဈအမြိုးမြိုး ရှိလာပါသညျ။ အဓိက စိုကျပြိုးပုံစံမြားမှာ (၁)အိမျတှငျး ဥယြာဉျခွံ (Home gardens) ၊ (၂) ကြောငျး ဥယြာဉျခွံ ( School gardens)၊ (၃) စီးပှားဖွဈ စိုကျပြိုးသော ဥယြာဉျခွံ ( Industrial Gardens)၊ (၄) အမြိုးသားပနျးခွံ (National Parks)၊ (၅) ပရဆေးစိုကျခငျး(Arboretum)၊ (၆) ကြေးလကျပနျးခွံ (Urban Parks) စသဖွငျ့ ရှိကွပါသညျ။
အခုခတျေအခါတှငျ အိမျတှငျးစိုကျပြိုးခွငျး မှ အခနျးတှငျးစိုကျပြိုးခွငျးကို လူအမြား ပိုမိုစိတျဝငျစား စိုကျပြိုးလာကွပါ သညျ။
အခနျးတှငျး စိုကျပြိုးရာတှငျ မြားသောအားဖွငျ့ ဘူး၊ အိုး၊ ကှနျကရဈအိုးမြား၊ ကှနျတိနျနာ တို့ကို အသုံးပွု စိုကျပြိုးနိုငျပါ သညျ။ ယခုအခါ အလှစိုကျအပငျမြား၊ ဟငျးသီးဟငျးရှကျမြား ၊ ဆေးဘကျဝငျအပငျမြား အသုံးပွုပွီး အိမျတှငျး အလှဆငျ ရနျအတှကျ အခနျးတှငျးစိုကျပြိုးနညျးကို ပိုမိုစိတျဝငျစား လူကွိုကျမြားလာသညျ။ အခြို့လူမြားသညျ စှနျ့ပဈ ပလပျစတဈ ဘူးမြား (သို့) ထိပျဝကဉျြးသော ဘူးကွီးမြားအသုံးပွု၍ အိမျတှငျးအပငျမြားကို စိုကျပြိုး ကွပါသညျ။ ထိုကဲ့သို့ စိုကျပြိုး သော စိုကျပြိုးနညျးစနဈကို “Terrarium ’’ ဟုချေါကွသညျ။
အခနျးတှငျး စိုကျပြိုးနညျးစနဈတှငျ အရိပျကွိုကျအပငျမြားကို ဦးစားပေးစိုကျပြိုးကွသညျ။ စိုကျပြိုးရနျ ရှေးခယျြထားသော အပငျမြားမှာ နရေောငျခွညျအနညျးငယျသာ လိုအပျသောအပငျမြားဖွဈပါသညျ။ အခနျးတှငျးစိုကျပြိုးခွငျးတှငျ အပငျ စိုကျ ပြိုးထားပွီးသော အိုး (သို့ ) ပုံးမြားကို မွပွေငျ၏အမွငျ့ ကှနျကရဈခုံမြား( သို့ ) သဈသားစငျမြားတှငျ ထားရှိ စိုကျပြိုး ကွပါသညျ။
ဟငျးသီးဟငျးရှကျအပငျ အားလုံးနီးပါးကို အခနျးတှငျး စိုကျပြိုးနညျးဖွငျ့ အောငျမွငျစှာစိုကျပြိုးနိုငျပါသညျ။ အခနျးတှငျး စိုကျပြိုးရာတှငျ အိပျခနျး ၊ ပွတငျးပေါကျဝရနျတာမြား ၊ အိမျရှဆေ့ငျခှငျအောကျဝရံတာ ၊ အိမျရှမေ့ကျြနှာစာ ၊ မီးဖိုခြောငျ ၊ လှခေါးထဈကဲ့သို့ ပွုလုပျထားသောထိုငျခုံမြား နှငျ့ အမိုး စသညျ့နရောမြားသညျ အခနျးတှငျးစိုကျပြိုးရနျအတှကျ အကောငျးဆုံး နရောမြားဖွဈပါသညျ။ မိမိအိမျအတှငျး စိုကျပြိုးရနျ အကောငျးဆုံးဖွဈမညျ့ နရောကို ရှေးခယျြရမညျ ဖွဈပါ သညျ။
၁။ အခနျးအတှငျးစိုကျပြိုးခွငျး ကို အလှယျတကူ ပွုလုပျနိုငျသလို မိမိအိမျအတှငျး မိမိကွိုကျနှဈသကျသော နရောတှငျ လှယျကူစှာ စီမံခနျ့ခှဲနိုငျပွီး အပွငျဘကျစိုကျပြိုးခွငျးမြားကဲ့သို့ နရောအမြားကွီးလညျး မလို အပျပါ။
၂။ အခနျးတှငျးစိုကျပြိုးခွငျးဟာ စိုကျပြိုးရေးကို စတငျလလေ့ာသူအတှကျ အကောငျးဆုံးပါ။
၃။ စိုကျပြိုးမွေ ပွငျဆငျရတာ လှနျစှာ လှယျကူပါသညျ။
၄။ ဟငျးသီးဟငျးရှကျနှငျ့ ပနျးမြားအား တဈနှဈပတျလုံး စိုကျပြိုးရရှိနိုငျပါသညျ။
၅။ ပိုးရောဂါကရြောကျမှုမှာလညျး ပွငျပစိုကျခငျးအတှငျး စိုကျပြိုးခွငျးထကျ ကရြောကျမှု နညျးပါသညျ။
၆။ အိမျထောငျရှငျမမြားနှငျ့ ကလေးငယျမြားလညျး စိုကျပြိုးထိနျးသိမျးနိုငျပါသညျ။
၇။ အခနျးတှငျးစိုကျပြိုးခွငျးသညျ အိမျကို လှပစရေုံသာမက လတျဆတျသော အျောဂနျးနဈ ဟငျးသီးဟငျး ရှကျမြား၊ ဆေးဖကျဝငျအပငျမြား ၊ ပနျးမြားကို ထုတျလုပျနိုငျပါသညျ။ လစဉျ အိမျအတှကျ ဟငျးသီး ဟငျးရှကျနှငျ့ ပတျသကျသညျ့ ကုနျကစြရိတျမြားလြော့ခစြပေါသညျ။
၈။ အခနျးတှငျး စိုကျပြိုးခွငျးသညျ စိတျပငျပနျးမှုကိုလညျး လြော့ခပြေးသညျ့ အကောငျးဆုံး အထောကျ အပံ့ လညျးဖွဈသညျ။
၉။ ကနျြးမာရေးခြို့တဲ့သူမြားမှ စိုကျပြိုးရေးကို စိတျပါဝငျစားသူမြားအနဖွေငျ့ မိမိအိမျတှငျ အခနျးတှငျး စိုကျပြိုးနိုငျပါသညျ။
၁၀။ စိုကျပြိုးသညျ့အပငျ၏ သဘာဝနှငျ့ လိုအပျခကျြ (အပူခြိနျ နှငျ့ပတျဝနျးကငျြ အခွအေနေ ) စသဖွငျ့ အပငျကွီးထှားရနျအတှကျ လိုအပျသညျ့အခွအေနအေား အခနျးအတှငျး အပငျစိုကျပြိုးပွီးခြိနျတှငျ ပွောငျး လဲပေးနိုငျသညျ။ (ဥပမာ – အခြို့အပငျမြားအနဖွေငျ့ အလငျးအမြားကွီးလိုအပျသညျ။ အခြို့မှာ တဝကျတဈပကျြအရိပျ လိုအပျသညျ။ အပငျလိုအပျသော အခွအေနပေျေါမူတညျပွီး စိုကျပြိုးထားသညျ့ အိုးမြားအားနရော အရှအေ့ပွောငျးပွုလုပျနိုငျ သညျ။
၁၁။ အခနျးတှငျးစိုကျပြိုးခွငျးသညျ မွကွေီးအနညျးငယျဖွငျ့ စိုကျပြိုးရသော စိုကျပြိုးရေးလညျး ဖွဈသညျ။
၁၂။ အကောငျးဆုံးသော အကြိုးရလာဒျအဖွဈ အခြို့အပငျမြား အခနျးအတှငျးစိုကျပြိုးခွငျးသညျ လထေုကို သနျ့စငျပေးသညျ။
၁၃။ ကှနျဒိုတိုကျခနျးမြားတှငျနထေိုငျပွီး စိုကျပြိုးမွပေိုငျဆိုငျမှု မရှိသောသူမြားအနဖွေငျ့ အခနျး အတှငျး စိုကျပြိုးခွငျးသညျ လှနျစှာအသုံးဝငျပွီး အထောကျအပံ့ဖွဈစသေညျ။
၁၄။ အခနျးအတှငျး စိုကျပြိုးခွငျးဖွငျ့ အစိမျးရောငျအပငျမြားအားလုံး ရှငျသနျရနျအတှကျ အထောကျအပံ့ လညျးဖွဈစပေါသညျ။
၁။ သဈပငျကွီးမြား စိုကျပြိုးရနျ မဖွဈနိုငျပါ။
၂။ ဓါတုဓါတျမွသွေဇာ သုံးစှဲမညျဆိုပါက အိုးအတှငျး စုကနျြနမေညျဖွဈပွီး စိုကျပြိုးထားသော အပငျ အတှကျ ဆိုးကြိုးကို ဖွဈစပေါသညျ။
၃။ အပငျအတှကျလိုအပျသော မွကွေီး၏အစိုဓါတျ ပုံမှနျဖွဈနရေနျ ခကျခဲသညျ။
၂။ မွဆှေေး သို့ ဓါတျမွသွေဇာ
၃။ အပငျ/ မြိုးစေ့
၄။ အိုး / ကွန်တိန်နာ
၇။ တမာဆီ ( ပိုးကာကှယျရနျ)
၈။ လကျကိုငျစိုကျပြိုးရေးသုံးကိရိယာမြား ကိုငျးဖွတျကတျကွေး/ ထှနျခွဈ/မွဆှေခရငျး/ ပေါကျပွား
အခနျးအတှငျးစိုကျပြိုးခွငျးအတှကျ မရှိမဖွဈလိုအပျခွငျးမဟုတျသျောလညျး အောကျပါလိုအပျခကျြမြား ရှိရငျတော့ ပိုကောငျးပါသညျ။ hydroponic system ဖွငျ့ အခနျးအတှငျးစိုကျပြိုးမညျဆိုပါ က မရှိမဖွဈလိုအပျပါသညျ။
အိမျ၏လှတျသောနရောတှငျစိုကျပြိုးခွငျး (Open area of House)
အဓိကအားဖွငျ့ အိမျရှေ့ လှခေါးထဈကဲ့သို့ ပွုလုပျထားသော ထိုငျခုံမြား နှငျ့ အမိုး ကဲ့သို့နရောမြားကို ဆိုလိုသညျ။ နှေ အခါတှငျ အလှနျပူသောနရောမြားဖွဈသညျ။ အပူဒဏျခံနိုငျ သောအပငျမြား၊ ဟငျးသီးဟငျးရှကျအပငျမြား၊ အသီးသီးပွီး သကျတမျးတိုသောအပငျမြား စသဖွငျ့ နရေောငျ နှငျ့ လေ အပွညျ့အဝ ရရှိရနျ ဘောငျအမွငျ့မြား ပွုလုပျခွငျး(သို့) သငျ့တျော သော ဘူး/အိုးမြား အသုံးပွုပွီး သငျ့တျောသောရပေေးစနဈဖွငျ့ စိုကျပြိုးနိုငျပါသညျ။
အိမျရှတှေ့ငျ စိုကျပြိုးခွငျး( In front of the house )
အရိပျကသြောအခွအေနတှေငျ ကွီးထှားနိုငျသညျ့ အပငျမြားကို ရှေးခယျြစိုကျပြိုးရပါမညျ။
အိပျခနျး နှငျ့ ဧညျ့ခနျးမြားတှငျ စိုကျပြိုးခွငျး
ပွတငျးပေါကျမြားဘေးတှငျ စိုကျပြိုးခွငျး – လဝေငျလထှေကျကောငျးပွီး အလငျးရောငျမြားမြား လိုအပျသောအပငျမြား ရှေးခယျြစိုကျပြိုးရပါမညျ။
အကောငျးဆုံးနရောမြားဖွဈပွီး နရေောငျနဲ့လအေပွညျ့အဝ ရရှိသောကွောငျ့ နရေောငျအပွညျ့အဝ လိုအပျသောအပငျမြား စိုကျပြိုးနိုငျပါသညျ။
စိုကျပြိုးအပငျမြား အပငျကွီးထှားခွငျး နှငျ့ အမွဈကွီးထှားမှုပျေါမူတညျပွီး စိုကျပြိုးထားသညျ့ အိုးမြားရှိမွမြေား လဲလှယျ ပေးရနျလိုအပျပါသညျ။ အိုးပွောငျးပေးခွငျးသညျ အခနျးတှငျး စိုကျပြိုးခွငျးတှငျ အရေးပါသညျ။ ပထမအိုးထဲမှ ပွောငျး ထဲ့မညျ့အိုးထဲသို့ အပငျအား ပွောငျးရှမေ့ထညျ့မှီ ပွောငျးထညျ့မညျ့ အိုးထဲတှငျ၂ နာရီ ကွိုတငျ မွဖွေညျ့ပွီး ရလေောငျး ထားရမညျ။ ရမြေား အိုးအောကျခွမှေ စီးထှကျသှားပွီးသညျအထိစောငျ့ပွီး ရမေမြားစရေနျလညျး သတိပွုရမညျ။ အပငျ အား အိုးအသဈသို့ ပွောငျးရှရေ့ာတှငျ အမွဈကို ထိခိုကျမှုမရှိစရေနျလညျး သတိပွုရမညျ။
ရပေေးခွငျးစနဈ ( Water Management)
အိုးမြားဖွငျ့ စိုကျပြိုးထားသောအခါ အပငျရလေောငျးခြိနျတှငျ ပိုပွီးဂရုစိုကျရနျလိုအပျပါသညျ။ ရမြေားလှနျးခွငျး နညျး လှနျးခွငျး မဖွဈအောငျသတိပွုရပါမညျ။ ရကေို အရှိနျပွငျးပွငျးမလောငျးဘဲ ဖွညျးဖွညျးနှငျ့ စိမျ့ဝငျအောငျ လောငျးရပါ မညျ။ ရလေိုအပျနသေညျကို အရှကျလိပျခွငျး၊ ညှိုးကနြခွေငျးကို မွငျခွငျးဖွငျ့ သိနိုငျမညျ။ အိုးထဲရှိမွသေညျ အမွဲစိုနရေနျ လိုအပျပွီး လဝေငျလထှေကျကောငျးစရေနျနှငျ့ ရစေီးဆငျးမှုကောငျးစရေနျ မကွာခဏ မွဆှေပေးရနျ လိုအပျပါသညျ။ အိုးမြားတှငျ ရစေီးဆငျးမှုကောငျး မှနျစသေညျ့ ရထှေကျပေါကျမြားရှိနစေရေနျလညျး လိုအပျပါသညျ။
အပငျပျေါသို့ ရပေေးစနဈ ( Syringing)
ရမှေုနျမြား အပငျ၏နရောအနှံပျေါသို့ကစြပွေီး ရကွေောငျ့ အပငျကို အေးစသေော ရလေောငျးစနဈ ဖွဈပါသညျ။ အခနျး တှငျး စိုကျပြိုးသောအပငျမြားမှာ မိုးကွောငျ့ရရှေိမှု မရှိသော အပငျမြားဖွဈသညျ့ အတှကျအပငျပျေါသို့ ရမေရောကျ နိုငျပါ။ ရဖွေနျးဘူးမြားဖွငျ့ အပငျရှိ အရှကျမြားအား တဖွညျးဖွညျးစိုအောငျ ဖွနျးရပါမညျ။ ထိုကဲ့သို့ ရဖွေနျးခွငျးဖွငျ့ အရှကျမြားကို သနျ့ရှငျးစခွေငျး၊ အပငျ၏အစာခကျြလုပျခွငျးလုပျငနျးကို ပိုမိုအကြိုးရှိစခွေငျး၊ စိုစှတျသောလထေုကို ဖွဈ စပွေီး အပငျကို ပိုမိုကနျြးမာသနျစှမျးစခွေငျး အကြိုးကြေးဇူးတို့ ရရှိပါသညျ။
အခနျးတှငျး စိုကျပြိုးရာတှငျ ထညျ့သှငျးစဉျးစား လိုကျနာရမညျ့ အခကျြမြား
၁။ ဝရံတာတှငျ စိုကျပြိုးသောအပငျမြားကို နရေောငျရရှိသညျ့ဘကျကို မကွာခဏလှညျ့ပေးရမညျ။ သို့မှ တဈပငျလုံး ညီညာစှာ ကွီးထှားမညျဖွဈသညျ။
၂။ နလေောငျခွငျးမဖွဈစရေနျ နရေောငျတိုကျရိုကျအကွာကွီး ကရြောကျသောနရောတှငျ အိုးမထားသငျ့။
၃။ အခြို့ပနျးပငျမြားသညျ ပနျးပှငျ့ရနျအတှကျ နရေောငျရရှိရနျ အခြိနျနာရီမြားစှာ လိုအပျသျောလညျး ရှကျလှ ပငျအမြားစုမှာ အလငျးလုံးဝ မလိုအပျပါ။
၄။ ဟငျးသီးဟငျးရှကျ အပငျမြားအတှကျ စိုစှတျသောအခွအေနေ လိုအပျပွီး အိမျအတှငျး အခနျးမြားတှငျ စိုစှတျနစေရေနျ ဖနျတီးဖို့မလှယျကူပါ။ စိုထိုငျးဆ အမွဲရှိနရေနျအတှကျ ရညျရှယျပွီး ကြောကျစရဈခဲမြား အပငျဘေးနားတှငျ ထညျ့ထားပွီး ကြောကျစရဈခဲမြား အပျေါတှငျ ရဖွေနျးပေးရပါမညျ။ နောကျတနညျး ကြောကျခကျဆှေးမြား (တဈဝကျတဈပကျြ ဆှေးမွခွေ့ောကျသှနေ့သေော ကြောကျတုံးကပျ အပငျမြား ) ကို အိုးအပျေါမကျြနှာပွငျတှငျ ထညျ့ပေးခွငျးဖွငျ့ အစိုဓါတျကို အမွဲရရှိစပေါသညျ။
၅။ စိုကျပြိုးသောနရောအတှကျ အမှနျကနျဆုံးအပငျကို ဝယျယူရနျလိုအပျသညျ။
၆။ လကျဖွငျ့ အလှယျတကူသုံးစှဲရမညျ့ စိုကျပြိုးရေးကိရိယာမြား ရှိရမညျ။
၇။ မြိုးစမှေ့ စတငျစိုကျပြိုးမညျဆိုပါက မိမိဒသေရှိ စိုကျပြိုးသူမြားမှ စိုကျပြိုးနညျးလမျးမြား နှငျ့ အပငျ၏ သဘာဝကို လလေ့ာဆုံးဖွတျရမညျ။ အခြို့သောအပငျမြားသညျ မြိုးစမှေ့ ပြိုးဘောငျဖွငျ့ အပငျဖောကျပွီး ပြိုးပငျကို ပွောငျးရှစေို့ကျရသျောလညျး အခြို့အပငျမြားမှာ တိုကျရိုကျအစခြေ့ စိုကျပြိုးနိုငျသညျ။ ပြိုးပငျ ငယျမြား ပွောငျးရှစေို့ကျပြိုးခြိနျတှငျ ပြိုးပငျမြား၏ အမွဈသညျ လှနျစှာထိခိုကျပကျြစီးလှယျသဖွငျ့ ပြိုးပငျမြားအား ဂရုတစိုကျ ကိုငျတှယျ ရှပွေ့ောငျး စိုကျပြိုးရမညျ။
၈။ အခနျးအတှငျး စိုကျပြိုးမညျဆိုပါက အပငျမြားစိုကျပြိုးမညျ့ ကှနျတိနျနာ (သို့) အိုး ကွီးလြှငျ ပိုကောငျး ပါသညျ။ မွကွေီးမြားမြားဝငျဆနျ့ပွီး စိုထိုငျးဆ ကွာရှညျထိနျးထားနိုငျခွငျး ဖွဈစေ၍ စိုကျပြိုးအပငျ၏ အမွဈပိုငျးကွီးထှားမှု ပိုမိုအထောကျအပံ့ဖွဈကာ အပငျပိုမို ကွီးထှားရှငျသနျစပေါသညျ။
Dream home garden will createareality လေးတဈခုကို
First Gardening definition seizing Open Garden planting orchards are planted in suchaway isaprocess. Depending on the growth of various types of plants comes in different agricultural systems. The main form of cultivation (1) Domestic gardens (Home and Gardens) (2) school gardens (School gardens), (3) the commercial planting orchards (Industrial Gardens), (4) National Park (National Parks), (5) herbal plantations (Arboretum), (6) do not havearural park (Urban Parks).
For now, when the domestic cultivation room, people have grown more interested in planting.
Choosingadestination to domestic cultivation
Room is usually grown, Oh, Concrete pots, It can be planted in containers. Now, plants, plant Vegetables, Herb used for home decoration room became more interested in how to grow in popularity. Some people have forsaken the top ofaplastic bottle oranarrow grown using large domestic plants. Suchaplant cultivation method called “Terrarium ”.
Room cultivation techniques like shadow on plants grown priority. The selected plants are grown plants require very little sunlight. Room cultivation pot plants already planted, or the height of the ground tank placed in the pure concrete or wood cultivation.
With almost all vegetable plants grow room can be grown successfully. Room bedroom, planting Windows, Across the front balcony, The front facade, kitchen, Stair as seats and where the roof of room to grow in the best places. Choose where best to plant his house is.
Room advantages of planting –
1. Planting easy even for his house, his favorite room and outside, where you can easily manage, such as plantingalot of space is not needed.
2. Room start planting agricultural analyst.
3. It is very easy to prepare agricultural land.
4. Available to grow vegetables and flowers year round.
5. Worm disease in farms during planting less prone than outside.
6. Married can be maintained and grown children.
7. Make room for planting beautiful home, but fresh encapsulation Vegetable herbal, The flowers can be produced. Monthly vegetables for home and reduce related costs.
8. Room reduce planting discouragement and the best support.
9. Poor health who are interested in agriculture, can be planted in his room at home.
1. Plants grow lights
3. စေုတျ fan
5. Box testing of soil nutrition
Where the release of planting (Open area of ​​House)
Mainly asafront Stair means places such as seats and roof. When the summer is very hot places. Plants that withstand heat, Vegetable plants, Even in the short term in each of the sun and wind to get the full frame height (suitable) / suitable for use pots can be planted by the water system.
House cultivation (In front of the house)
Certain conditions, which can grow in the shade plants selected must be cultivated.
Planting in the bedroom and living room
Planting next to the windows, good ventilation should be planted plants need plenty of light to choose.
Patio in planting
Full of the best places in the sun and wind is required to receive full sun plants can be grown.
The care and maintenance of trees
The plants grown in the plant depending on the plant growth and root growth in pots may need an exchange of land areas. The pot cultivation in the change room is important. First out of the pot into the pot to be put before the relocation of plants in pots will add2hours must be pre-watered land fill. Wait until the pot of water away from the bottom and must be careful not to water. Plants moved intoanew pot, the roots must be careful to avoid damage.
Water system (Water Management)
When grown in pots need to give more attention to plants when watering. The water must be very careful to avoid too low. လောငျးဘဲ slowly at high speed, and the water must be poured to infiltrate. When necessary, leaf roll, Can not see the finger. Oh, the ground is always wet in the flow of water should be ventilated well and good – often need stimulation. The flow of water inapot to makeagood exit is required.
Plants onto the water system (Syringing)
The plant’s extensive onto the spray while the cold water plant watering system. Room plants are grown inalack of rain water plants can be given water onto the plant. Bottles of water, plants must be sprinkled with wet leaves gradually. This leaves by sprinkling holy water, The trees make the refining business more effectively, The humid air can be even more healthy benefits package.
Room cultivation of the factors to be considered Compliance
1. Patio plants grown in the sun side must be turned frequently. Will havearight to grow.
2. Avoid sunburn long celebrated in the pot is placed directly in the sun.
3. Some flowers are flowers need the clock to get the sun but leaves most of the light is absolutely needed.
4. Vegetable plants need wet conditions farther in wet rooms is not easy to create. Aimed to persistent humidity gravel plant has been put aside to sprinkle water on the gravel. Alternatively Partially soft coral (become dry rocks on the surface of the pot plants) by adding moisture to always be available.
5. The planting area of ​​real need to purchase the plant.
6. Manual must be easy to use agricultural tools.
7. If you will start planting the seeds from local growers decided to study the nature of the methods of cultivation and plant. Some of the seeds of plants are nursery plants frame moved through seedlings planted seeds directly, but some plants that can be planted. When moved to the small seedlings planted the roots of seedlings is extremely vulnerable to plant seedlings to be handled carefully by the migrant.
8. Room to grow plants will grow better if the container or pot. Just stretch soil humidity sustainable growth of roots of the plants to grow. This will support more and more growth.
Ref; http // www.agrifarming.in / indoor-gardening-beginners -guide
ရဲယိုရွက် ငါးပေါင်းထုပ်လုပ်​နည်း စားလို့အရမ်း​ကောင်း